Iindaba - 2020 Septemba Wenzhou International Optical Fair
1.74 iilensi zombono omnye
Ilensi eqhubela phambili / yeBifocal
1.56 Freeform Inkqubela phambili yeelensi
1.56 SV Ifoto yePensile
1.56 SV Ifoto yeLens eluhlaza
Iilensi ze-anti-Blue Ray
1.56 iilensi ezikhanyayo zeBlue Blue
I-1.56 Inkqubela phambili yePhotoogray Semi igqityiwe nge-HC / HMC
I-1.499 yeFlethi ePhakamileyo ePhakamileyo igqityiwe nge-UC / HC
Izitayile zamehlo zeTitanium
Isakhelo seMetical Optical
2020 Septemba Wenzhou International Optical Fair
I-18th Wenzhou International Optical Fair (WOF 2020) iya kubanjelwa Wenzhou International Convention kunye Exhibition Centre ukususela nge-18 ukuya ku-20 Septemba 2020!
Isikali salo mboniso siza kufikelela kuma-30,200 eemitha zesikwere sendawo yokubonisa, kunye neenkampani ezingaphezu kwama-410 ezisuka eGuangzhou naseShenzhen eGuangdong, eXiamen eFujian, eDanyang e Jiangsu, eXinhe e-Hebei, e-Yujiang e-Jiangxi, eRongchang e-Chongqing, e-Cangxi e-Sichuan, Linhai and Yuhuan e Zhejiang, kunye Ouhai e Wenzhou. Amacandelo emizi-mveliso yesiglasi yesizwe efana neRuian neRuian aqokelelene ndawonye, ​​kunye namashishini avela eShanghai, Shaanxi, Ningbo, Zhejiang, Foshan, Guangdong nakwezinye iindawo ajoyine inkxaso.
Imiboniso ibandakanya izakhelo zamehlo, iiglasi zelanga, iiglasi zezemidlalo, iiglasi zabantwana, iiglasi zokufunda, iilensi kunye nezinto ezingenanto, ukupakishwa kweiglasi, izinto eziluhlaza kunye nezinto ezincedisayo kunye nezixhobo, izixhobo ezizodwa, izixhobo zokuvelisa, izixhobo zamehlo kunye nezixhobo, iilensi zonxibelelwano kunye neemveliso zononophelo, izixhobo zokuthwala iiglasi kunye nemathiriyeli, njl.njl. Indawo yemiboniso ikwabeka indawo yokubonisa abayili bamehlo baseTshayina nabangaphandle, indawo yokubonisa iiglasi kunye neiglasi zokuzikhusela, indawo enesipili, kunye nendawo yenkonzo yabaphulaphuli ukwenza unxibelelwano lweshishini lobuchule kunye neqonga lokutshintshiselana ngolwazi. kumzi mveliso weeye.
Emva kweminyaka kwezulu kushishino, Wenzhou International Optical Fair uye waqokelela a lot of data umthengi yobungcali, data ivenkile enombala, data yeshishini chain kazwelonke, kwaye waqokelela data enkulu abathengi kushishino enombala yesizwe. IWenzhou International Optical Fair iya kusebenzisa iminxeba, imiyalezo ebhaliweyo, ii-imeyile, kunye neentengiso zangaphandle. , Intengiso ekwi-Intanethi, ukukhuthazwa kwemithombo yeendaba kunye nezinye iindlela zokufikelela kubathengi kunye nokubonelela ababonisi ngokona kufanelekileyo kweshishini.
Abayili bokuqala kunye neempawu ezivela e-Itali, Jemani, Canada, njl. Emva kovavanyo olungqongqo, ezona mveliso zoyilo zilungileyo ezilingana nomboniso womboniso zonyulwa ukwenza umthendeleko wenqanaba lomthendeleko wamazwe aphesheya.
Umgangatho olungileyo waseTshayina ogqityiweyo / 1.56 / ...
UGiovanni F. Akola, uFranco Cardini, uDomenico Del Niro, uGiordano Bruno Gehry, uGennaro Margiri, uGennaro San Giuliano, uMirella Seri, uMarcelo Veneziani. UDa Fidel Castro nguCharlie Sheen onguJulio Iglesias, u-certuni hanno trasc ...
Ukukhula kukaTesla ayisiyongxaki: ...
Ukukhetha ngokukhawuleza iilensi eziqhubela phambili ch ...
Ukufakwa kweelensi eziqhubela phambili bekusoloko kungumba oshushu kwishishini le-optometry. Isizathu sokuba iilensi eziqhubela phambili zahlukile kwilensi yokukhanya enye kukuba isibini seelensi eziqhubekayo zinokusombulula ingxaki ...
Ayisiyiyo kuphela ilensi ye-photochromic engwevu, b ...
Iilensi eziguqula imibala, ezikwabizwa ngokuba ziilensi "ezinemifanekiso". Ngenxa yokuba into yemichiza yesilivere yesilayidi yongezwa kwilensi, iilensi ezibonakalayo ezingacacanga ziya kuba c ...
Kutheni le nto ukutshintsha kombala / i-photochromic myopia ...
Njengokuvela rhoqo kwe-myopic, zonke iintlobo zegilasi ze-myopic zivela ngokungapheliyo, ke umbala uzitshintshe njani iiglasi ze-myopic zaba yingxaki ekhathalelwa ngumntu wonke. Ngenxa yokuba imibala yeglasi ye-myopia ibonakala ilungile, ...
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. Inkcazo: ICP 备 11022256 号 -1